Mkpa mmanụ dị mkpa iji kwụsị ị Smụ sịga - Osimiri Ndị Dị Mkpa | AromaEasy
AromaEasy na-enye mmanụ kachasị mkpa dị mkpa iji nyere gị aka ịkwụsị ị smokingụ sịga, na ụzọ kachasị mma maka ịkwụsị ị smokingụ sịga.
Ọ bụrụ na ị gbalịrị ịkwụsị ị smokingụ sịga, mara na ịkwụsị nwere ike ịbụ oge siri ike jupụtara na agụụ, isi ọwụwa, na ike ọgwụgwụ. Nke a bụ ihe kpatara eziokwu ahụ naanị 7% ndị mmadụ na-ejikwa ịkwụsị ị toụ sịga na ọnwụnwa ha mbụ.
Chọrọ enyemaka ụfọdụ mgbe ị na-a toụ sịga? Enwere ụzọ ụfọdụ iji mee ka ịkwụsị ị smokingụ sịga dị mfe ma nwekwuo ohere ị ofụ sịga kwụsị. Na post a, anyị ga-ekwu maka mmanụ isii kachasị mkpa iji nyere gị aka ma ọ bụ onye ị hụrụ n'anya ịkwụsị ị .ụ sịga.
Osisi isii kacha mkpa dị mkpa iji kwụsị ịokingụ sịga
Mmanụ dị mkpa nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ị smokingụ sịga? Azịza dị mkpirikpi bụ Ee na Mba. E gosipụtaghị mmanụ ndị dị mkpa maka ịgwọ ụdị ọrịa ọ bụla. Ndị dị iche iche ga-emeghachi omume mmanụ dị mkpa n'ụzọ dị iche iche, yabụ mmetụta nke mmanụ dị mkpa nwere ike ịdị iche na ndị dị iche iche.
Agbanyeghị, ọnwụnwa na nchegbu, bụ ihe abụọ dị mkpa na-akpata ise siga. Nke a bụ ọtụtụ mmanụ dị mkpa iji belata ụjọ na igbochi ọnwụnwa ahụ, iji nyere gị aka pụọ ​​na mgbaàmà ịkwụsị ego ese siga.
Gụọnụ chọpụta ihe ndị ahụ.
mmanụ dị mkpa iji nyere aka ịkwụsị ị smokingụ sịga
Chamomile Mmanụ dị mkpa maka itkwụsị Ise Siga
Chamomile mmanụ dị mkpa ga-abụ ngwá ọrụ zuru oke mgbe ịkwesịrị iwepụ azụ mgbe ụbọchị siri ike na mmetụta nke ọnwụnwa bụ ihe na-akpali akpali n'ezie. N'ezie, mmanụ dị mkpa nke chamomile juputara n'ihe na-atọ ụtọ. Mmanụ a dị ịtụnanya dị oke mkpa na-enyere aka belata nchegbu nke na-abịa na enweghịzi ike ị forụ sịga.
Site na mmetụta dị mma, Roman Chamomile nwere ike belata nrụgide nke ahụ, na-enyere ndị mmadụ aka iwe iwe. Mmanụ ma ọ bụ na-enye nsogbu na mmanụ chamomile dị mkpa ga-enye aka mgbe agụụ ị cigaretteụ sịga na-agba mgbe ogologo ụbọchị gasịrị.
Chamomile nwere chamazulene, nke dị mkpa na ngwa ọgwụgwọ n'ihi ọrụ ya dị egwu nke radieshon. N'oge nicotine na-apụ, ndị mmadụ nwere ike inwe nsogbu ụfọdụ, gụnyere ụfọdụ ahụrụ ọkụ na mgbakasị ahụ. Gbalịa chamomile mkpa mmanụ dị ka tonic iji mee ka ahụ gị dịkwuo elu ma kwalite sistemụ ahụ.
Peoplefọdụ ndị na-ekwu na mmanụ chamomile mkpa isi dị ka apụl. Anyị na-aghọrọ chamomile n'oge na-adịghị anya mgbe oge ntoju sitere na ugbo n’ime Hungary, weputa mmanu di nkpa site na mmiri ikuku.
Ezi ntụziaka mmanụ iji kwụsị ise anwụrụ
Mmanụ Mkpa Mkpa oroma
Chọrọ mmanụ dị elu mgbe ị na-eche ihe mgbaàmà nke ụjọ n'oge oge nicotine?
Mmanụ oroma dị ụtọ dị mkpa na-ewetara gburugburu anyị. Ekwenyere na ị ga-enwe mmetụta ị sedụ ọgwụ na ọnọdụ, ísì ụtọ oroma nwere ike inyere gị aka idozi iwelata.
Mgbe ị na-enwe mgbanwe ngosipụta nke ịkwụsị ị smokingụ sịga, ahụ gị nwere ike ịchọ nrụpụta. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado mmanụ mmanụ mmanụ dị ụtọ maka gị. You nwere ike inye mmanụ mmanụ mmanụ dị mkpa iji meziwanye ọnọdụ mgbakasị ahụ ma nye onwe gị ume.
iji mmanụ dị mkpa iji kwụsị ise anwụrụ
Lavender Mkpa mmanụ maka ịkwụsị Sm Smụ Sịga
Nweta mmanu di mmanu ma oburu na ichoro ịhapụ ịtesu sịga. Mmanụ lavender nwere ike inyere gị ezigbo aka ịkwụsịlata nchekasị na nchegbu ị na-enwekarị mgbe ị kwụsịrị ị .ụ sịga.
Na mgbakwunye, a mara lavender maka imechi ahụ ụjọ. Smokingkwụsị ise siga agaghị abụ otu achịcha. Insomnia, otu n'ime ihe mgbaàmà na-eso na mwepu nicotine, bụ nsogbu na-akpasu iwe. Nke a bụ ebe mmanụ lavender dị mkpa nwere ike inye aka. Anyị niile maara na lavender dị irè n'ịbelata ehighị ụra na mgbakasị ahụ.
Kedu ihe ọzọ, mmanụ lavender dị mkpa na-enwe mmetụta dị mma na sistem iku ume, na-enyere ndị mmadụ aka na mgbaàmà nke nsogbu iku ume.
mmanụ dị mkpa iji nyere gị aka ịkwụsị ị smokingụ sịga
Ka anyị chee ya ihu; ihe mgbaàmà nke ịkwụsị nicotine na-eme ka ọtụtụ mmadụ taa ahụhụ. Ọtụtụ mmadụ na-enweta isi ọwụwa, nsogbu nri nri, yana njikwa iwe mgbe ha na-anwa ịkwụsị ị smokingụ sịga. Okwu ndị a nwere ike ịmanye ha ịlaghachi azụ sịga ha tupu ha amalite njem ịkwụsị ị smokingụ sịga.
Nke a bụ ebe mmanụ dị gị mkpa ga-enyere gị aka! Ekwenye peppermint ka ọ belata isi ọwụwa na ọgbụgbọ. Mmanụ na-esi ísì ụtọ siri ike, na-enye ume ọhụrụ nke mmanụ ata dị mkpa ga-enyere aka wepụ anwụrụ anwụrụ ọkụ. Gbalịa ịmalite ụbọchị gị na obere pepemint dị mkpa mmanụ kama jidere mkpọ sịga gị.
Rosemary Mkpa mmanu maka itkwụsị Ise Siga
Fọdụ ndị akersụrụma kwuru na otu nsogbu ha nwetara n'oge Sm duringụ Sịga bụ oke isi ọwụwa. Y’oburu na nke gi, tugharia mmanu mmanu di nkpa.
Rosemary dị mkpa ka amata nwere ọgwụ mgbochi mgbochi siri ike na-ebelata isi ọwụwa na ọgbụgbọ. Ruo ọtụtụ afọ, ndị Eshia ejirila mmanụ dị mkpa dị ka ọgwụ mmadụ maka isi ọwụwa.
Na Rosemary mkpa mmanụ nwere ike ime ihe ndị ọzọ. Achọpụtara iji nyere aka belata nchekasị, bulie uche gị, mmanụ dị mkpa a na-ewu ewu nwekwara ike inye aka melite ọrụ ọgụgụ isi, nke na-enyere gị aka n'oge usoro ndọrọ ego.
na-eji oji oji di nkpa
Black Pekin Mkpa Mmanụ Ala
A kwenyere na mmanụ ojii mmanụ dị ezigbo mkpa ọfụma na enyere ndị mmadụ aka ịkwụsị ị .ụ sịga.
Nnyocha e mere na nso nso a na-ekpughe na ose ojii bụ ihe dị ike iji nyere ndị mmadụ aka imeri ihe nicotine riri ahụ. Obere mmanụ ojii dị mkpa na-eme nke ọma n'ibelata agụụ na-agụ ya na ọgwụgwọ ndị ọzọ sitere n'okike.
Ọzọkwa, ose ojii na-enyere ndị mmadụ aka site n'ibelata ihe mgbaàmà na-adịghị mma metụtara mwepu nicotine. Dịka otu onye n’ime mmanụ dị mkpa, mmanụ a dị mkpa ga - enyere gị aka belata ụjọ mgbe oku a na - ese anwụrụ ga - akawanye elu mgbe ụbọchị siri ike.
Isi ihe kpatara eji eji ose ojii bụ ihe kacha mkpa iji kwụsị ịse anwụrụ bụ na ọ nwere ike inyere ndị mmadụ aka n'ọkwa anụ ahụ. Mmetụta oji oji na -emepụta n'ime obi yiri mmetụta nke ị smokingụ sịga. O nwere ike buru ibu ma ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike iwepụ echiche nke ọnwụnwa.
Kwụsị Sịsị Mmanụ Na Mmanụ Dị Mkpa
Ikwu eziokwu, ịkwụsị ị smokingụ sịga bụ ọrụ siri ike. Mmetụta na-akpata nchekasị n'oge ịotụ nicotine na-esokarị isi ọwụwa. Ọchịchọ sịga na-akpali ndị mmadụ iru maka "naanị otu onye", ebe ha na-ekwupụta "Emere m ya".
Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ike iji mmanụ dị mkpa belata nchekasị ma gbochie ọnwụnwa mgbe anyị kwụsịrị ị smokingụ sịga. Iji mmanụ ndị dị mkpa mee ihe nwere ike ime ka anyị nwekwuo mmetụta, na-eme ka ọ dị mfe ịkwụsị nicotine n'ụzọ mmetụta uche. Ọzọkwa, ibi ụdị ndụ ọhụụ na aromatherapy na-enyere aka dochie omume ise siga.
Inha na mmanụ dị mkpa iji kwụsị ị smokingụ sịga
Ise siga bụ àgwà na ọtụtụ ọkwa. Ọ bụghị nanị na ndị nicotine riri ahụ na-ese siga, kamakwa ha na-azụlite àgwà nke ị raisingụ sịga na ọnụ ha na iku ume nke ọma. Iku ume nke ọma mgbe nrụgide dị mma, mana eji siga na-etinye ya n'ọnụ.
Inhalation bụ ụzọ kacha ike iji nyere gị aka ịkwụsị ị .ụ sịga. Epkụ mmụọ miri emi ga-e imitateomi usoro e si a smokingụ sịga, na-akwado gị ịkwụsị ị smokingụ sịga. Ọzọkwa, ikuku oxygen a gbakwụnyere agbakọ na-enye ahụ gị ike ma nwee ike inye aka belata nchekasị gị.
Nke mbu bu idebe mmanu di nkpa ma gi ubochi niile. Naanị otu n'ime mmanụ isii dị mkpa iji kwụsị ị smokingụ sịga, nke ekwuru n’elu.
Mgbe ị malitere inwe sịga, agụụ tee mmanụ n'agbata ọbụ aka gị. Debe aka gị n'ihu imi gị na ọnụ gị, kubie ume nwayọ nwayọ nwayọ dịka ị na-ewere anwụrụ sịga, wee were nwayọ nwayọ. Tinyegharịa usoro a n'ime ihe dị ka nkeji atọ.
N’ezie, ị nwere ike ịbanye na karama mmanụ dị mkpa, ị nwere ike itinye ntụ nke mmanụ na bọọlụ ma ọ bụ anụ ahụ na ịba mmiri site na ebe ahụ. Ma ọ bụ, ịnwere ike ịme obere inhaler.
Kwụsị ị smokingụ sịga na mmanụ dị mkpa
Otherzọ ọzọ, nke kachasị mma iji nweta mmanụ dị oke mkpa iji kwụsị ị smokingụ sịga, bụ ịta ahụ site na onye na-ahụ maka ị smokingụ mmanya. Naanị tinye ụfọdụ mmanụ dị mkpa na onye na-akpaghasị ya, wee nwee anụ ahụ na uru uche ya site na ọgwụgwọ aromatherapy. I nwere ike ime nke ahụ ma ị nọ n’ọfịs ma ọ bụ n’ụlọ.
mmanụ dị mkpa inhaler kwụsị ị smokingụ sịga
Iji bulie arụmọrụ nke ọgwụ aromatherapy, n'ezie ịkwesịrị ịhọrọ ọdịiche dị elu mgbe niile. Ọ bụghị ndị nrụpụta niile ka arụpụtara. Diffọdụ ndị mgbasa ozi nwere ihe mebere plastic nwere ike imeghachi ma mebie mmanụ ndị dị mkpa, na-eme ka mmanụ daa. Ezie na ụfọdụ ndị ọzọ diffusers na-enweta adịghị mma arụmọrụ ke vaporizing mmanụ dị mkpa n'ime nnukwu ohere. Zuta diffuser si onye na-enye onye na-eweta ihe nkesa pụrụ ịtụkwasị obi, wee bido ị aụ ọgwụ aromụ na njem gị iji kwụsị ị smokingụ sịga.
Maka ozi gbasara ndị na-ekesa mmanụ dị mkpa, gụọ AromaEasy's Kedu ka ndị na - akpata nsogbu mmanụ si arụ ọrụ. Amaghi ihe di nkpa mmanu di na diffuser? Nke a bụ ndu AromaEasy ole mpịakọta mmanụ dị mkpa iji tinye onye na-agbanwe ihe.
Aromatherapy abughi okwu anwansi; ọ nweghị ike iwepu ihe niile ị na-achọsi ike na mgbaàmà iwepụ n'abalị. Ọzọkwa, mmanụ dị mkpa abụghị ihe ọzọ maka ọgwụgwọ. Na, ị ga-agakwuru dọkịta gị mgbe ọ bụla maka ndụmọdụ tupu ị mee mkpebi metụtara ahụike gị. Mgbe ị kwusịrị nke ahụ, iji mmanụ ndị dị mkpa n’ụzọ ziri ezi, na ndụmọdụ dọkịta gị, ga-enyere gị aka nke ukwuu ná mgbalị gị ịkwụsị ise siga. Họrọ mmanụ ndị dị mkpa a kpọtụrụ aha n'elu, ma bido njem ị ga-akwụsị ịkwụsị anwụrụ ọkụ taa.